Nahoana No Faranan’ny Filohan’i Taiwan Ma Ying-Jeou Amin’ny Fihaonana Antampon’ny Helodrano Ety Ny Fitondrany ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2015 3:44 GMT
Eric Chu, filoha avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana any Kuomingtang, Taiwan, nihaona tamin'i Filoha Xi Jinping, filohan'i Shina, tamin'ny 4 May 2015. Sary avy amin'ny faham-baovaon'ny fanjakana Shinoa China News.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'ny mpanoratra ao amin'ny New Bloom, Brian Hioe, mpianatra M.A ao amin'ny Anjerimanontolon'i Columbia no sady mpanoratra mahaleotena momba ny politika sy ny hafanampo sosialy. Navoaka tao amin'ny New Bloom tamin'ny 4 Novambra ny lahatsoratra voalohany mitondra ny lohateny hoe ” Ny Fiandohan'ny Faran'ny lalaon'i Ma-Xi ve? Antso Ho Fihetsehana Nataon'ny Fiarahamonim-pirenena ho setrin'ny fihaonana antampony Ma-Xi Nokarakaraina ” ary avoaka indray ato amin'ny Global voices araka ny fifanarahana fiaraha-miasa.
“Toa tsapa ho fiandohan'ny fiafarana ity,”hoy ny olona tamiko rehefa nandre fa hatao any Singapore amin'ny 7 Novambra ny fihaonana antampony Ma-Xi.
Toy ny mahavariana ilay fihaonana tamin'ny ora farany teo amin'ny filoha Shinoa Xi Jinping sy ny filohan'i Taiwan Ma Ying-Jeou, satria efa fantatra rahateo fa ho tapitra ny fotoana fitondran'ny filoha Ma ary roa volana latsaka kely sisa dia ho tonga ny fifidianana. Moa ve hanehoan'ny fitantanana mampalahelon'i Ma ny fara-heriny mba hifehezana ny fifandraisana eo amin'ny helodrano èty mialoha ny hahataperan'ny fotoana fitondrany ilay fihaonana ? Mazava ho azy, fa andro vitsy monja mialoha ilay fihaonana no nilazàna ilay fihaonana sady mampiomana fa hisy zavatra tena, tena tsy ampoizina hiseho eto.
Raha tampoka ny fihaonan'i Ma sy Xi, dia manara-dia ilay fihaonana iray hafa teo aloha teo amin'i Xi sy Eric Chu filohan'ny Kuomingtang (KMT), antoko eo amin'ny fitondrana izany. I Ma no filohan'ny KMT tamin'ny taona lasa, nodimbiasan'i Chu taorian'ny faharesen'ny KMT tamin'ny fifidianana nine-in-one (fifidianana any Taiwan) , niaraka tamin'ny fametraham-pialàn'i Ma ho fandraisana andraikitra tamin'ny faharesen'ny KMT. Fa amin'ny mpijery dia toy ny saribakolin'i Ma i Chu, satria mpikambana ao amin'ny vondrona nisintaka KMT mpomba ny fampiraisana an'i Shina “tanibe” notarihan'i Ma sady mbola baikoin'i Ma izay mbola mijanona ho lehibe tò teny ao amin'ny KMT. Mandritra izany fotoana izany, mazava ho azy fa i Chu no lasa mpifaninana amin'ny fifidianana ho filoha amin'ny 2016 atolotry ny KMT.
Ny andraikitra maha-mpitarika ny KMT amin'ny fifandraisana ao amin'ny helodrano èty
Nandraman'ny KMT hatao fihaonana manan-tantara lehibe amin'ny fifandraisana ao amin'ny helodrano èty ilay fihaonana teo amin'i Chu sy Xi— ny KMT irery ihany fa tsy ny antoko mpanohitra Demokratika Progresista (DPP), no nahavita nanatanteraka izany, noho ny fifandraisana ara-tantara nisy teo amin'ny KMT sy ny Antoko Kaominista Shinoa (CCP). Fa satria iray amin'ny tanjona lavitra ezak'i Ma ny ho filoha Taiwane voalohany amperinasa, hatramin'ny fiafaran'ny ady an-trano tany Shina sy nitsanganan'ny RPC, hihaona amin'izay filoha Shinoa mipetraka eo, taratry ny tsy fahombiazan'i Ma no fahtàna ny fihaonana Chu-Xi — heverina fa hiala amin'ny fitondràna i Ma, miaraka amin'ny tsy nahavitàny nanatratra ny tanjony sy nanimbàny ny lazany tamin'ny fisisihana amin'ny politikan'ny helodrano èty tsy mamim-bahoaka.
Ny tranga iray hafa tamin'ny taona lasa ny fitsidihanà manampahefana ambony Taiwane tany Shina, mazava ho azy fa ny fitsidihan'i Lien Chan an'i Shina noho ny matso lehiben'ny tafika tamin'ny Septambra 2015. Raha ny marina, na dia ny KMT aza dia nanameloka ny fitsidihan'i Lien tany Shina— toa hoe fanapahankevitr'i Lien irery ny nandeha tany Shina, raha adika dia raisiny an-tànana ny politika ivelan'i Taiwan.
Ny fitsidihan'i Lien sy Chu an'i Shina dia samy nahatezitra mafy ny vahoaka Taiwane. Izay nampametraka fanontaniana hoe : inona marina no tadiavin'i Ma hotanterahana eto? Tsotra fotsiny, roa volana latsaka kely sisa no hitoerany eo amin'ny fitondrana, dia heverin'i Ma ve fa afaka hanilika tanteraka sy tsy hiraharaha ny hevi-bahoaka izy ?
Nahoana no tsinontsinoavin'i Ma ny hatezeram-bahoaka ?
Na dia samy nampanantena aza i Ma sy Xi fa tsy hisy fanapahankevitra politika manan-danja mivoaka amin'ity fihaonana ity, dia marina ihany fa mety mikendry zavatra hafa ambonimbony kokoa noho izay fisehosehoana fotsiny ilay fihaonana. Afaka mifandray amin'ny fotoana rehetra tiany i Ma sy Xi — tsy misy ilàna fandefasana izany ho fanta-bahoaka. Azo heverina fa ny fihaonana eo amin'i Ma sy Xi dia fanaporofoana fa manana ny fahaizana manokana hitantanana ny fifandraisan'i Shina sy Taiwan izay tsy ananan'ny DPP ny KMT, indrindra fa eo amin'izao fotoan-tsarotra mialoha ny fifidianana ho an'ny KMT izao, tsy vitan'ny hoe hiavaka amin'ny tsy fahazoana ny toeran'ny filoha intsony ny KMT fa tena tsy ho tian'ny vahoaka intsony koa, tahaka ny tantara teo aloha, eny fa mampisalasala hatramin'ny hitohizan'ny fisiany aza.
Angamba fanantenan'ny KMT ny hanaporofoan'ilay fihaonana indray ny fahaizamanaony manokana amin'ny fitarihana ny fifampiraharahana amin'ny CPP mba hitohizan'ny filaminana manerana ny helodrano èty. Amin'izay lafiny izay, dia manolo-kevitra hanamafy orina ny fisian'ny KMT ilay fihaonana. Izany hoe, na dia tsy manantena ny handresy amin'ny fifidianana filoha aza ny KMT dia mijanona ho zava-dehibe amin'ny fihazonana ny filaminana manerana ny helodrano èty ao Taiwan ny antoko. Raha hanao jery todika ny amin'ny zava-nisy tany aloha ireo mpikambana ao amin'ny mpanao gazety iraisam-pirenena— miaraka amin'ireo kely fantany tamin'ny zava-nisy tamin'ny taona lasa— dia angamba tena diso ny filazana fa mariky ny fivoaran'ny fifandraisana Shina-Taiwan io fihaonana io, raha ny marina dia hanova ny fijerin'ny tontolo iraisam-pirenena momba ny fifandraisana ao amin'ny helodrano èty eo amin'i Shina sy Taiwan io fihaonana io.
Seho politika momba ny antom-pisian'ny KMT
Azo heverina ihany koa fa mety hanampy amin'ny famahana ny olana anatin'ny KMT ny endrika manan-tantaran'ny fihaonana Ma-Xi. Araka ny navoitran'ny fanendrena an'i Hung Hsiu-chu ho mpihazakazaka ho fidiana ho filoha sy ny ady amin'ny fanakanana azy tsy ho mpifaninana atolotry ny KMT dia tsinjo fa rah-mitatao ny ho fandraisin'ireo olon-doza mahery fihetsika hatrany amin'ny tsinay maintiny, mpomba ny fampiraisana, ny fifehezana ny KMT. Saingy azo heverina ho fandresen'ny antoko iray manontolo ny endrika manan-tantaran'ny fihaonan'ny filohan'ny KMT Taiwane sy ny filoha Shinoa, ary izany dia mety hampivondrona ny fisarahana anatiny izay efa niseho tamin'ny “fivakisan'ny vondrona” KMT taorian'ny fihevahevan'i Hung Hsiu-Chu. Fa na dia izany aza, dia mainka mety hanampy trotraka ny ” fivakisan'ny KMT Taiwane” izany, amin'ny fotoana hisian'ny disadisa toy ny hoe rehefa avela hitady toerana ho solombavambahoaka i Wang Jinping filohan'ny ” vondrona taiwane”. Noho izany misy olana anaty miseho ao amin'ny KMT tamin'ny fanomanana ity fihaonana ity.
Ny fihetsik'ireo vondrona politika sy ny fiarahamonim-pirenena
Fa tsy hilefitra amin'izany ny fiarahamonim-pirenena ao Taiwan. Toa kely fotsiny ny lesona voarain'i Ma momba ny fanohizana ny fihizingizinana hanohy ilay politikan'ny helodrano èty tsy tian'ny vahoaka tamin'ny taona lasa, taorian'ny Sunflower Movement (Hetsika Tanamasoandro), ary hitanatsika ny firongatry ny hetsi-panoherana tampoka isaky ny manao izany izy. Tamin'ny fanomanana ny fandaharam-potoanan'ny Ministeran'ny Fanabeazana amin'ity lohataona ity, ohatra, hitantsika ny hetsi-panoherana nitroatra tampoka manohitra ny fanapahankevitry ny fitondran'i Ma momba ny fangatahan'i Taiwan tamin'ny faha-31 Martsa any amin'ny Banky Aziatika momba ny fampindramam-bola ho an'ny fotodrafitrasa tarihan'i Shina— mpanao fihetsiketsehana an'arivony mahery no nivory teo ivelan'ny fonenan'ny filoham-pirenena. Tsy misy mampiavaka azy ity indray mitoraka ity— sady tsy isalasalàna, fa taorian'ny hetsi-panoherana lavareny tamin'ny taona lasa, na ny fitondran'i Ma aza dia mahatsapa izany amin'izao fotoana izao. Marina fa tsy mampaninona izany, na heverina fa azo atao aza ny tsy hiraika amin'ny hetsiky ny tanora Taiwane satria tsy mankaiza izany.
Efa nisy antso hanao hetsika sy fanamelohana ny Antoko sosialy Demokraty sy ny Antoko Free Taiwan nataon'ireo mpitarika malaza ny fiarahamonim-pirenena toa an-dry Huang Kuo-Chang avy amin'ny Sunflower Movement sy ilay kintan'ny gadona rock Freddy Lim, izay samy mpikambana ao amin'ny Antokon'ny Hery Vaovao (NPP). Nampiantso fivoriana hatao eo ivelan'ny Antenimiera mpanao lalàna Yuan i Huang Kuo-Chang sy Freddy Lim ny marainan'ny 4 Novambra. Tsy nisy nifandraisany tamin'izay niseho teo, satria ny fihaonan'i Ma sy Xi dia efa voatondro fa hatao mandritra ny faran'ny herinandro, tsy isalasalàna fa ny faran'ny herinandro (7 na 8 Nov) ihany koa no hanaovana ny hetsi-panoherana.
Tena mahamay be. Nisy filaminana noho ny havizanana angamba roa volana taorian'ny hetsi-panoherana momba ny boky fianarana tamin'ny volana Jolay. Fa fotoana tokony hihetsehan'ireo mpikatroka mafana fo indray izao. Tsy hanaiky lembenana ny fiarahamonim-pirenena Taiwane.